Calaamadaha Lagu Garto Cudurka Baabasiirka & Qaababka La Iskaga Daaweeyo - Aayaha
Baabasiirka waa caabuq iyo barar ku dhaca xididada dabada soo gala.
Calaamadiisaha waxaa kamid ah
Dhiig bax aan xanuun lahayn inta lagu jiro dhaqdhaqaaqa mindhicirka –
Cun-cun saaid ah oo agagaarka dabada ah.
Xanuun ama raaxo la’aan marka aad fadhido.
Barar mesha laga saxaroodo iyo agagaarkeeda.
Kuus kasoo baxa gudaha ama dibadda dabadda oo aad u xanuun badan marka la taabto.
Waxaa sababa inta badan baabasiirka cadaadis iyo culeys lasoo saaro xididada dabada.
Waxyaalaha keena ee ugu waaweyn waxaa kamid ah
-Saxaradda oo adkaata dabadeed marka ay soo baxayso cadaadis saarta xididada futada.
-inbadan oo qofku shumo ama uusan saxaroon.
-cayilka ama buurnaata
– haweenka uurka leh
– in aad yareysato cuntada qolafta leh
ADIGA OO GURIGAADA JOOGA ISKA DAAWEE.
BIYO DIIRAN IYO CUSBO
baaldi ama baaf soo qaado kadib biyo soo kululeyso si diirimaad ah oo aan ku gubeyn kuna dar cusbo ilaa dhowr qaado ah kadib ku dhex fariiso,
Waxay daawo yihiin biyahaasi in ay kaa joojiyaan xanuunka cun-cunka iyo dhiiga badan ee socdey. Kuna dhex fadhi ilaa 20 daqiiqo markad saxaratoo kadib.
Waa mid kamid ah daawooyinka ugu muhiimsan ee babasiirka waxa uuna qofka isticmaala ka dhigaa mid ka reysta baabasiirka xanuunkiisa iyo cun cunkiisa.
U isticmaal inta aad shiidato tufaaxo in aad mariso dhamaan meelaha hoose ee ay nabadaradu ku yaal ilaa afka dabada.
Ama cabitaan ahaan inta aad u qasato ku dar hal qaado oo cusbo ah cabna maalin walba.
CUNTOOYINKA QOLAFTA LEH
waxaad isku deydaa mar walba in aad jilciso calooshaada si saxaradu marka ay kaa soo baxayso aysan u daqnin nabarada marka waa in aad isticmaasha cuntooyinka dahaarka leh ee caloosha socodsiiya.
Sida Timirta, Digirta, qudradda caleenta ah oo aad badsato salarka iyo ansalaatada, iyo looska oo diirka hoose ee guduudka ah aad ku cunto sidoo kale mida ugu dahaarka fcn waa yaanyada oo aadan ka diirin dubkeeda oo aad cunto.
BARAF AMA QABOWGA
Ku rid barafka maro ama shukuman ku duuduub barafka kadib saar dabada una daa ilaa 15 daqiiqo, kani waxa uu kaa caawinayaa in uu yaraado bararkii iyo xanuunkii, tani waxay noqon kartaa daaweyn waxtar leh. Had iyo jeer ku duub baraf maryo ama shukumaan waligana ha saarin barafka si toos oo aysan waxba ka xigin dabadda.
Daawada ugu muhiimsan ee baabasiirka waa in ay saxaradaadu jilicsanaata marka aad sidaas u dareentana in ay wax yar oo saxaro ah kusoo qabteen aad horey suuliga ama musqusha ka tagtaa oo aad iskaga soo faarujisaaa saxarada.
Haddii daaweynta guriga aysan aheyn mid waxtar leh kadib muddo ka badan laba toddobaad oo aad isticmaaleysey , ka sameeyso ballan dhakhtarkaada si uu si toos ah ugu arko xaladaadu halka ay mareyso.
Hadii Dhiig baxa saaid ah oo soo dareeraya kaa socdo waa xalad amarjansi ah oo kharar galin karta nolashaada waa in aad iyana hadii uu dhiig badani kaa baxo aad si deg deg ah u booqataa amarjensi hosbitaal.
Sabato ah ah waxa baxaya waa dhiigaadii hadii dhiigu kaa yaraadana halis ayaad gali kartaa.
W/Q: Dr Mohamed Amen
Waxyaabaha Qofna Uusan Kuu Sheegin Ee Ku Saabsan Qalliinka Dhalmada
QAABAB YAAB LEH OO ADIGOO GURIGAAGA JOOGO AAD KU OGAAN KARTID INAAD UUR LEEDAHAY
3 siyaabood oo dabiici ah oo Haweenku ku balaarin karaan Naasaha
Sida ugu wanaagsan ee aad isaga wada deyn karto sigaar cabidda inta aadan ka shalaayin
Daawada afka lagu cadeysto ma kentaa Cudurka Kansarka ?